Maalinta: Noofambar 21, 2018
Tareenka koowaad ee Tegreega ee Mashruuca TER
Tareenka ugu horreeyay oo ku dhex jira baaxadda mashruuca tareenka xawaaraha-dheereeya oo ka socda bartamaha magaalada Dakar illaa garoonka diyaaradaha ee Blaise Diagne wuxuu gaaray goobta dhismaha. Tareenada oo ka kooban afar gaari, rakaabka koowaad iyo kan labaad oo leh isugeyn dherer ah 72 m [More ...]
jiilka koowaad ee cusub Turkey ayaa soo saaray TÜDEMSAŞ in Sivas baabuurta xamuulka qaran laga rabey. Sivas, Turkey Tareennada Makiinado Industry soo saaray ay sabab u tahay saddex sano oo waxbarasho ah Agaasinka Guud ee Turkey ee ugu horeysay [More ...]
Suldaan II. Abdulhamid Khan, inta lagu gudajiray dhismaha qeybta Madiina ee Wadada Tareenka ee Hejaz, Hz. Muxammad wuxuu doonayey inuu sameeyo dadaallo si looga hortago buuq iyo gariir qadarintiisa. Ujeeddadan darteed, farsamada muddadaas [More ...]
Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee UTİKAD, sannadkan 12. Bandhigga loo yaqaan 'Logitrans Fair' ayaa la qabtay markii ugu horreeysay isagoo la kulmay daneeyayaasha waaxaha. Isaga oo ka hadlaya furitaankii carwadii UTİKAD ee Emre Emre [More ...]
Shirkada Ganacsiga Burcad Badeeda Bilowday
Shirka Wershadaha ee Bursa, waxaa soo qabanqaabiyay iskaashiga Ururka Warshadaha Mashiinka Mashiinka (MIB) iyo Warshadaha Mashiinka Mashiinnada Mashiinka Mashiinka (TİAD), Wasaaradda Ganacsiga, KOSGEB iyo Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa, Mashruuca Birta ee Bursa. [More ...]
Sarrifka Lacagta Gobolka ee Marmaray
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa ka jawaabay mooshin. Turhan wuxuu cadeeyay in lacagaha la bixiyay Euro sida ku xusan heshiiska Marmaray. [More ...]
Jasiiradda Taray ee Cayirova oo dhammaatay
4.5 waxay bedeshay wajiga degmada iyadoo qeyb weyn ka qaadatay nidaamka sanadlaha ah waxayna siisay Çayırova aqoonsi casri ah oo lagu noolaan karo Magaalada Munayırova waxay ku dhamaatay beerta tababarka taraafikada, oo la bilaabay in la dhiso bilihii la soo dhaafay. Koraaya si dhakhso leh [More ...]
Maanta, 21 November 1927 Havza-Amasya-Samsun ayaa la furay taariikhda. Nuri Demirağ wuxuu ahaa qandaraasle
Shirkadda Talgo ee Isbaanishka waxay dhistaa Dhismaha Longannet ee Scotland
Shirkad tareen oo laga leeyahay dalka Isbaanishka ee Talgo, oo ah soo-saare tareenka rakaabka ah, ayaa ku dhawaaqday inay warshaddeedii ugu horreeyay ka dhisi doonto waddanka Ingiriiska Longannet, oo u dhow Falkirk, Scotland. Shirkaddu waxay sidoo kale ka dhistay xarun cusub hal-abuurnimo Chesterfield, England, oo isu keeni doonta alaabada Ingiriiska laga keeno. [More ...]
Metros si ay u neefsadaan Gaadiidkayga Istanbuul
Nidaamka gegada Diyaaradaha Istanbul iyo Sabiha Gokcen Airport ayaa si xawli ah u socda. Marka la soo bandhigo khadadka, waxaa jiri doona nasiino weyn oo gaadiid ah oo loo raaco garoomada diyaaradaha. Qadka metrooga Gayrettepe-İstanbul wuxuu ku yaal 2020, Sabiha Gökçen Airport-Tavşantepe [More ...]
Tareenka magaalo madaxda Barcelona ayaa ka soo baxa tareenka xNUMX ee ku dhintay 1
Roobabkii dhowaan ka da’ay gobolka Catalonia ee Spain, labada ugu dambeysay ee tareenka rakaabka ah ee ku safraya khadka R06.15 ee 4 ee gobolka Vacarisses ee Barcelona sababtuna tahay dhul gariir [More ...]
450 Milyan Euro maalgashiga xarunta Erciyes Ski
Xarunta Erciyes Ski Center waxay la kulantay wakiilo safar oo ka socda Istanbul Kayseri Erciyes Ski Center, oo ah mid kamid ah xarumaha yar yar ee barafka adduunka, waxaa maalgalin doona 2023 milyan oo Yuuro illaa sanadka 450. Ka boodinta Erciyes [More ...]
Waqooyiga Baaskiilaha ayaa la casriyeeyay
BURULAŞ, oo xiriir la leh Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa, ayaa saacadihii ugu dambeeyay ee baaskiil wadista BursaRay si loo ballaariyo isticmaalka baaskiillada. Cusboonaysiinta, baaskiil caadi ah inta lagu jiro saacadaha dadku badan yihiin (07: 00 - 09: 30, 16: 30 - 19: 30) [More ...]
Wadooyinka Ercis Cusbooneysiiyay
Dawlada Hoose ee Van, oo ay weheliyaan waddooyinka waawayn ee Ercih waxay dib u cusbooneysiiyeen jidad badan oo xaafadeed ah. Qiyaastii 45 kilomitirkii wadooyinka iyo mashiinka asfaltiga ah ayaa lagu sameeyay qaab laba nooc ah 85'i boqolkiiba ayaa la dhameeyay oo loo soo bandhigay muwaadiniinta. [More ...]